I-China 55 HRC Carbide 3 Iifluthi eziMiselweyo zokuPhela eziPhezulu zeAluminiyam zelinye icala labenzi kunye nabathengisi | Mingtaishun
I-55 ye-HRC Carbide 3 Iifreyithi eziMiselweyo zokuGcina iMileth yeAluminiyam
Sineenjineli eziphambili kwezi mveliso kunye neqela elisebenzayo kuphando. Ngaphezu koko, sinemilomo yethu yogcino-mpepha kunye neemarike e-China ngexabiso eliphantsi. Ke ngoko, sinokuhlangabezana nemibuzo eyahlukeneyo evela kubathengi abahlukeneyo. Nceda ufumane iwebhusayithi yethu ukukhangela ulwazi ngakumbi kwiimveliso zethu.
Iimveliso zethu zamkelwe ngokubanzi kwaye zithembekile kubasebenzisi kwaye zinokuhlangabezana ngokuqhubekayo neemfuno zoqoqosho nezentlalo. Siyabamkela abathengi abatsha nabadala abavela kuzo zonke iinkalo zobomi ukuba banxibelelane nathi kubudlelwane bamashishini bexesha elizayo kunye nempumelelo efanayo!
Ubungcali, Ukuzinikela kuhlala kusisiseko kwimishini yethu. Besisoloko sihambelana nabathengi abakhonzayo, sidala iinjongo zolawulo lwexabiso kwaye sinamathela ekunyanisekeni, ukuzinikela, umbono wolawulo oqhubekayo.
I-MTS-3 * 9 * 3 * 50 * 3T 3 9 3 50 3 2 8.4
I-MTS-3 * 12 * 3 * 75 * 3T 3 12 3 75 3 2 12
I-MTS-3 * 15 * 3 * 100 3 15 3 100 3 2 15
I-MTS-1 * 3 * 4 * 50 1 3 4 50 3 1 9
I-MTS-1.5 * 5 * 4 * 50 1.5 5 4 50 3 1 9
I-MTS-2 * 6 * 4 * 50 2 6 4 50 3 1 9
I-MTS-2.5 * 8 * 4 * 50 2.5 8 4 50 3 1 9
I-MTS-3 * 9 * 4 * 50 3 9 4 50 3 1 9
I-MTS-3.5 * 12 * 4 * 50 3.5 12 4 50 3 1 9
I-MTS-4 * 12 * 4 * 50 * 3T 4 12 4 50 3 2 8
I-MTS-4 * 20 * 4 * 75 4 20 4 75 3 2 12
I-MTS-4 * 25 * 4 * 100 4 25 4 100 3 2 15
I-MTS-5 * 15 * 5 * 50 5 15 5 50 3 2 13.5
I-MTS-5 * 20 * 5 * 75 5 20 5 75 3 2 19
I-MTS-5 * 25 * 5 * 100 5 25 6 100 3 2 22
I-MTS-2 * 6 * 6 * 50 2 6 6 50 3 1 16
I-MTS-3 * 9 * 6 * 50 3 9 6 50 3 1 16
I-MTS-4 * 12 * 6 * 50 4 12 6 50 3 1 16
I-MTS-5 * 15 * 6 * 50 5 15 6 50 3 1 14
I-MTS-6 * 18 * 6 * 50 6 18 6 50 3 2 13.5
I-MTS-6 * 30 * 6 * 75 6 30 6 75 3 2 19
I-MTS-6 * 30 * 6 * 100 6 30 6 100 3 2 22
I-MTS-6 * 40 * 6 * 150 6 40 6 150 3 2 50
I-MTS-7 * 21 * 8 * 60 7 21 8 60 3 1 28
I-MTS-8 * 24 * 8 * 60 8 24 8 60 3 2 25
I-MTS-8 * 35 * 8 * 75 8 35 8 75 3 2 30
I-MTS-8 * 40 * 8 * 100 8 40 8 100 3 2 39
I-MTS-8 * 50 * 8 * 150 8 50 8 150 3 2 69
I-MTS-9 * 27 * 10 * 75 9 27 10 75 3 1 48
I-MTS-10 * 30 * 10 * 75 10 30 10 75 3 2 43
I-MTS-10 * 40 * 10 * 100 10 40 10 100 3 2 60
I-MTS-10 * 50 * 10 * 150 10 50 10 150 3 2 110
I-MTS-11 * 33 * 12 * 75 11 33 12 75 3 1 83
I-MTS-12 * 36 * 12 * 75 12 36 12 75 3 2 60
I-MTS-12 * 45 * 12 * 100 * 3T 12 45 12 100 3 2 76
I-MTS-12 * 60 * 12 * 150 12 60 12 150 3 2 138
I-MTS-14 * 35 * 14 * 80 14 35 14 80 3 2 90
I-MTS-14 * 45 * 14 * 100 14 45 14 100 3 2 100
I-MTS-14 * 65 * 14 * 150 14 65 14 150 3 2 180
I-MTS-16 * 45 * 16 * 100 16 45 16 100 3 2 140
I-MTS-16 * 65 * 16 * 150 16 65 16 150 3 2 230
I-MTS-18 * 45 * 18 * 100 18 45 18 100 3 2 170
I-MTS-18 * 70 * 18 * 150 18 70 18 150 3 2 280
I-MTS-20 * 45 * 20 * 100 20 45 20 100 3 2 200
I-MTS-20 * 70 * 20 * 150 20 70 20 150 3 2 350
(1) Ngenxa yezizathu zokhuseleko, siya kuthumela kuphela iiodolo kwidilesi yokuhambisa oqinisekisileyo.
(2) Asinaxanduva lwayo nayiphi na ingozi, ukulibaziseka okanye eminye imicimbi eluxanduva lwenkonzo yokuhambisa ngenqanawa.
(3) Abathengi banoxanduva lwayo nayiphi na irhafu kunye / okanye uxanduva oluhlawulwa lilizwe labo.
Abathengi banoxanduva lwayo nayiphi na i-inshurensi abaziva ukuba iyimfuneko.
(1) Ukuba awonelisekanga kukuthenga kwakho, unokutshintsha loo nto. Umthengi unoxanduva lwazo zonke ezinye iifizi zokuthumela ngenqanawe.
(2) Umthengi kufuneka aqhakamshelane nathi kwiintsuku ezi-3 zokuhanjiswa ukuba unqwenela ukutshintshiselana ngezinto ezineziphene okanye ngokungafanelekanga.
(3) Amanyathelo oTshintshiselwano:
a. Nxibelelana nathi ngeZiko lomyalezo leAlibaba.com;
b. Nika iinkcukacha kangangoko unakho malunga nengxaki onayo;
c. Ugunyaziso lokubuyisa into luya kukhutshwa;
d. Buyisela into yotshintshiselwano ekuvunyelwene ngalo.
(4) Zonke izinto mazibuyiselwe zikwimeko ebekuzo, ukuze zilungele ukutshintshiselana.
(5) Nceda uqaphele:
Asigubungeli naziphi na izinto zomonakalo emva kokusetyenziswa okanye ngenxa yomonakalo wamanzi.
"Umgangatho olungileyo nexabiso elifanelekileyo" yimigaqo yethu yeshishini. Ukuba unomdla kwiimveliso zethu okanye unemibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi. Sinethemba lokuseka ubudlelwane bokusebenzisana nawe kwikamva elikufutshane.
Egqithileyo 55 I-HRC Carbide 3 Iifreyithi eziMiselweyo zokuPhela zoMgangatho weAluminiyam
Okulandelayo: I-55 ye-HRC Carbide 4 yokuGqibela ukuRhola iMill Mill
2 Flute khabhayithi Isiphelo Mill
4 Flute khabhayithi Isiphelo Mill
Ifluti enye yeCarbide End Mill
Flute yokuphela kweMill
I-55 ye-HRC yokuphela kwesikwere-2 Flute
I-55 ye-HRC yokuphela kwesikwere-4 ifluti D4mm
I-55 HRC khabhayithi 2 Ubungakanani obuqhelekileyo beBhola yeNos ...
HRC55 Ubude obude bokuphela kwesikwere